Miyaa la ixtiraamayaa xayawaankeyga caymiska safarka?
Ammaanka & Caymiska Caymis
Xitaa kuwa safarka ugu badan waxay u baahan yihiin meel ay ku wacaan guriga. Ma jirto wax guriga ka dhigi kara in ka badan inta uu haysto qof afar lugood leh oo sugaya. Waxaa jira dammaanad gaar ah oo ku saabsan hindise-bixiyeyaasha casriga ah ee haysta xayawaankooda: iyada oo aan loo eegin meesha ay tagayaan, qof waligiis wuxuu noqon doonaa guri sugaya si uu ugu salaamo jacayl iyo jacayl.
Marwalba mar, waxay u egtahay dabiiciga dabiiciga ah in la keeno saaxiibo furan oo ay weheliyaan socdaalka soo socda.
Haddii ay tahay maalmaha sabtida ee harada ama safar kala duwan oo dunida ah, xayawaanku wuxuu noqon karaa qof dabiici ah oo raaxo leh si uu ula socdo. Iyadoo ay ku xiran tahay meeshii ay socotay, dadka safarka ah qaarkood waxay iibsan doonaan qorshe caymis safar si ay ugu daboolaan haddii ay dhacdo dhaawac, xanuun, ama dhacdo aan la fileyn. Haddii ay ugu xumaatay in ay dhacdo, rabbaayadda rabbaayad ah miyaa la daboolayaa?
Nasiib darro, xayawaanku ma lahan xuquuq isku mid ah iyo heerka caymiska sida kuwa ay u shaqeeyaan. Kuwa qorsheynaya safarka xayawaanka xayawaanka ku jira waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan dhammaan xaaladaha saameynaya inta ay safrayaan - labadaba meesha u socdo iyo inta ay ka fog tahay guriga.
Carriers waxay leeyihiin Siyaasado kala duwan oo loogu talagalay xayawaanka
Kuwa u socdaalaya hawada, siyaasadaha xayawaanka rabaayadu way kala duwanaan karaan. Sida caadiga ah xeerka, safaradu waxay u baahan yihiin inay isku-duweeyaan iyaga oo ku saabsan xeerarka safarka ee xayawaanka iyo samaynta qorshe fog fog ka hor. Eeyaha yaryar iyo bisadaha kuwaas oo ku safraya dariiqa safarka ah ayaa laga yaabaa inay awood u leeyihiin inay la safraan milkiilahooda iyagoo qaadanaya shandado.
Haddii xayawaanku aanu si fudud ugu habboonayn cabsida, ama xayawaan badan oo xayawaan ah oo badani ku jiraan, waxaa laga yaabaa in loo qaado in loo qaado sida boorsada la hubiyay.
Si ay u safraan sida boorsada la hubiyay, eyda ayaa laga yaabaa inay u baahdaan dhowr deegaan oo gaar ah, oo ay ku jiraan da'da ugu yar, safarka safarka, iyo shahaadada caafimaadka xoolaha.
Duulimaadyadu waxay sidoo kale soo rogi karaan kharash gaar ah oo loogu talagalay saaxiibada gurigooda markaad safraysid Siyaasadani way kala duwan tahay shirkadaha diyaaradaha.
Ugu dambeyntiiba, inkasta oo shirkad diyaaradeed ay xayirmi karto xayawaanka raba, mid kastaa wuxuu leeyahay heerar kala duwan oo ah masruufka xayawaanka raba marka loo dhiibo gudbiyaha. Sida lagu caddeeyey kiis sharci oo hore, qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ayaa xaddidaya waajibaadkooda xaddiga isku midka ah ee loogu talagalay boorsada la hubiyay, oo hadda lagu bixiyo $ 3,300 duulimaadyada gudaha. Haddii xayawaanku uu ku dhaawacmay ama uu ku dhinto daryeelka hawada, diyaaradaha diyaaradaha ayaa kaliya bixin kara qadarka qaddarka la sheegay, ilaa ugu badnaan.
Caymiska safarka ma aha mid asal ah daboolka xayawaanka
Socotada caalamiga ah waxay iibsan doonaan caymiska safarka si ay ugu daboolaan caafimaadkooda inta ay ku jiraan waddan shisheeye. Miyay kuwan xor u ah xayawaanku sidan u yihiin? Jawaabta waa mid adag oo adag.
Haddii xayawaan loo soo saaro diyaarad ayaa la hubiyaa ama la qaadaa, markaa caymiska safarka ayaa laga yaabaa inay tixgeliyaan xayawaanka sida boorsada. Sidaa darteed, caymiska safarka ayaa dabooli kara waxa ku dhacaya xayawaankaaga si toos ah oo ka yimaada maareynta hawada. Haddii xayawaanku uu ku dhaawacmo safarka, caymiska safarka ayaa laga yaabaa inuu doorto inuu ku daboolo dhaawaca lugta. Haddii aan la dareemin, markaas qiimaha rasmiga ah ee xayawaanka ayaa laga yaabaa in dib loo soo celiyo sida lugaha.
Ka hor inta aadan iibsan caymiska safarka, hubi inaad weydiiso sida xayawaanku u ekaansho siyaasadda.
Caymiska safarku ma dabooli karaa joojinta safarka haddii diyaarada aysan haysan karin xayawaanka? Guud ahaan, siyaasado caymis safar oo badan ayaan u arkin xaaladaha xayawaanka inay yihiin xaalado la aqbali karo oo lagu joojin karo safar, oo ay ku jiraan dib u dajinta safarka sababtoo ah duulistu ma qaadi karto xayawaanka. Kuwa safarka ah ee ka walwalsan in duulimaadku ay noqon karto "xayawaan-rogaal-celin" waa in ay tixgeliyaan ku darsamida Ku-daba-daro Wixii kasta oo Sabab ah qorshaha caymiska
Caymiska safarka miyuu dhaawac u geystaa xayawaanka marka uu dibadda joogo? Sababtoo ah siyaasadaha caymiska safarka waxay ku koobanyihiin dadka safarka ah, dad badan ma dabooli doonaan dhaawac ama jirro xayawaan gurigooda ah marka ay safar ku socdaan adduunka. Intaa waxaa dheer, meelaha qaarkood, sida Hawaii , waxay leeyihiin shuruudaha karantiilka ee lagu galo xayawaanka.
Iyadoo loo yaqaan kharashka socdaalayaasha, caymisku ma dabooli karo dib u dhac ama lumis natiijo ahaan. Si kastaba ha noqotee, kuwa ku safraya xayawaanka rooga ah ee ku yaal Maraykanka waa inay tixgeliyaan qorshe caymis gaar ah, kaas oo dabooli kara kharashyada haddii xayawaanku uu ku dhaawacmo inta uu socdaalayo.
Inkasta oo xayawaanku aysan ahayn mid caado ahaan ah "caymis" caymiska safarka, dadka safarka ah waxay qaadan karaan degaan macquul ah si ay u daryeeshaan saaxiibadooda jilicsan. Markaad fahamto waxa caymisku rabi doono oo aan dabooli doonin, dadka safarka ah waxay samayn karaan go'aano wanaagsan oo ku saabsan goorta la safrayo xayawaanka, iyo goorta ay guriga ka tagayaan.
Caymiska Socdaalka Sanadlaha ah iyo Caawinta
Talooyin ku saabsan iibsashada caymiska safarka
5 Su'aalood Waa inaad Weydiiso Ka hor intaadan iibsan Caymiska Socdaalka
Waxa aan iibsaday: Caymiska safarka iyo kharashka daaweynta ee celceliska
Caymiska Travelex: Hagaha Fulinta
Caymiska socdaalka 101
5 Isku-xirka Damiinka Connecticut RV
Fasaxyada Sare ee Dalxiiska Caribbean All-Including
Bandhig Soccer ah oo ku yaala Downtown Dallas
8 ka mid ah Meelaha ugu Wanaagsan ee Hungary
Munaasabadaha Nofeembar ee Miami
Bixinta Euros ee booqashada Spain: ATM ama Hubinta Socdaalka?
Dhuxulada ugu Fiican ee Caanaha la qalajiyey ee Denver
10 Waxyaabaha Aad Ka Ogaawday MAA
Ku safrida Carcassonne
Qaado riwaayad raaxo leh oo ku taal Utah
Dhismaha Zapotec Rugta ee Oaxaca, Mexico
Waxa aad filaneyso markaad ku daboosho dusha sare ee guryaha